Inona ny fahasamihafana misy amin'ny takamoa sy ny Rhizome | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy amin'ny takamoa sy ny Rhizome | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Hafa / Inona no tsy mampitovy ny takamoa sy ny Rhizome
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny takamoa sy ny Rhizome
13 aogositra 2021 Narotsak'i Samanthi
Ny mahasamihafa azy eo amin'ny takamoa sy ny rhizome dia ny bolam-boalavo dia zana-ketsa ambanin'ny tany misy ravin- koditra manify maniry eo aminy, raha ny rhizome kosa dia ampahany amin'ilay fotony lehibe maniry mitsivalana ambanin'ny tany.
Ny takamoa, corms, tubers , ary rhizome dia ampahany anana amin'ny zavamaniry izay manampy ny zavamaniry hiaina anaty toe-javatra mafy. Ny takamoa sy ny rhizome dia ampahany amin'ny zavamaniry novaina ambanin'ny tany izay manana toerana fitahirizana sakafo. Amin'ny fotodrafitrasa, ny rhizome dia fotony mivaivay ambanin'ny tany izay maniry mitsivalana. Ny takamoa dia kibony novaina ambanin'ny tany. Samy miteraka zavamaniry vaovao ny takamoa sy ny rhizome ary ilaina amin'ny fambolena zavamaniry.
2. Inona no atao hoe takamoa
3. Inona no atao hoe Rhizome
4. Fitoviana - Bulb sy Rhizome
5. Bulb vs Rhizome amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe takamoa?
Ny takamoa dia rafitra novaina hita amin'ny zavamaniry. Ara-drafitra, io ilay tsimpona novaina ambanin'ny tany. Miorina mizana, ravina novaina. Mitahiry kanidina ao anaty mizana ireto ny takamoa. Ao amin'ny ilany ambany amin'ny tahony mihena ny takamoa (takelaka basal) dia nipoitra ny fakany. Ny tifitra dia avy amin'ny tampon'ny takamoa. Tsy toy ny rhizome, ny takamoa dia tsy manana node sy internode. Ny takamoa dia misy tsimoka eo anilany koa.
Sary 01: Volana
Misy karazany roa ny jiro tena izy toy ny takamoa sy ny takamoa. Ny takamoa dia misy fonony (akanjo lava) toy ny taratasy hiarovana ny mizana, fa ny jirony kosa tsy manana akanjo. Ny zavamaniry sasany dia azo aely amin'ny alàlan'ny takamoa. Tongolo, tongolo gasy, tulip ary lisy dia ohatra amin'ny takamoa.
Inona no atao hoe Rhizome?
Rhizome dia fotony matevina miovaova ambanin'ny tany izay maniry mitsivalana eo ambanin'ny tany. Raha ny marina dia fotony toy ny faka izy io izay ao anatin'ny fotony lehibe. Mitombo miadana ao anaty tany izy io. Ity vatan-kazo ambanin'ny tany ity dia misy node sy internodes. Avy amin'ny node dia misy fakany sy tsimoka vaovao.
Sary 02: Rhizome
Rhizome dia ampahany ilaina amin'ny fampielezana ny zavamaniry. Izy io dia afaka mamorona zavamaniry vaovao. Ny Rhizome dia hita amin'ny zavamaniry toy ny sakamalao, iris, canna lily, lanterne sinoa, oak-poizina, volotsangana, bermudagrass, ary sledge voanjo volomparasy.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny takamoa sy ny Rhizome?
Ny takamoa sy ny rhizome dia taho novaina ambanin'ny tany.
Ny lahasa voalohany amin'ny rafitra roa dia ny fitehirizana sakafo.
Ireo rafitra ireo dia miantoka ny fahaveloman'ny zavamaniry.
Ireo rafitra roa ireo dia afaka miteraka zavamaniry vaovao.
Izy ireo dia manan-danja amin'ny fampielezana ny zavamaniry.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny takamoa sy ny Rhizome?
Ny bolam-boalavo dia zana-kazo novaina ambanin'ny tany misy ravina toy ny mizana maniry manodidina ny tsimoka, raha ny rhizome kosa dia fotony ambanin'ny tany izay maniry mitsivalana. Ka io no mahasamihafa indrindra ny takamoa sy ny rhizome. Ny tongolo, tongolo gasy, lilia ary tulip dia ohatra amin'ny jiro, raha ohatra ny sakamalao, turmerika, hopoka, asparagus ary lotus dia ohatra amin'ny rhizome.
Tsy maniry mitsivalana ny takamoa, fa ny rhizome kosa dia maniry mitsivalana amin'ny tany. Ankoatr'izay, ny takamoa dia miendrika globe fa ny rhizome dia tsy ara-dalàna na voarary. Ny tsy fitovizan'ny takamoa sy ny rhizome dia ny tsy fisian'ny tadim-poitra sy ny internode ny takamoa, fa ny rhizome kosa dia misy node sy internodes.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ireo fahasamihafana misy eo amin'ny takamoa sy ny rhizome amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Bulb vs Rhizome
Ny takamoa dia tsiry voaova izay miova ambanin'ny tany. Rhizome no fotodrafitrasa lehibe novaina ambanin'ny tany. Ny takamoa sy ny rhizome dia samy ampiasaina amin'ny fampielezana zavamaniry zavamaniry. Manana kirany ny takamoa raha tsy manana ny rhizome. Ankoatr'izay, ny rhizome dia manana node sy internode raha tsy manana kosa ny takamoa. Ny Rhizome dia maniry mitsivalana eo ambanin'ny tany, fa ny takamoa kosa tsy maniry mitsivalana. Araka izany, mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny takamoa sy ny rhizome.
1. “ Tubers, Corms, Rhizonmes, ary Bulbs .” Meadows Amerikanina.
2. “ Tranon-javamaniry: Volam-boaloboka, Corms, Tubers & Rhizome .” Payne's Nurseries, 28 feb. 2014.
1. " Plants-bulbs-muscari-blue-nature-4857308 " (CC0) via Pixabay
2. " Ginger rhizome " Nosoratan'i Mk2010 - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny pigment sy ny loko Fahasamihafana eo amin'ny safidy sy ny fanapahan-kevitra Fahasamihafana eo amin'ny pejy mavo sy fotsy Fahasamihafana eo amin'ny pedigree sy ny karyotype Fahasamihafana eo amin'ny Phycocyanin sy Allophycocyanin
Filed Under: Ny hafa
Momba ny mpanoratra: Samanthi
Dr.Samanthi Udayangani dia mitazona B.Sc. Diplaoma amin'ny siansa momba ny zavamaniry, M.Sc. amin'ny Molekular sy Applied Microbiology, ary PhD amin'ny Applied Microbiology. Ny zavatra mahaliana azy dia ny bio-zezika, ny fifandraisan'ny zavamaniry-mikraoba, ny mikraoba mikraoba, ny holatra amin'ny tany ary ny haolojika fungal.
Fahasamihafana eo amin'ny Calcification Dystrophic sy Metastatic
Fahasamihafana eo amin'ny Nickel sy Silver
Fahasamihafana eo amin'ny ampondra sy ny ampondra
Fahasamihafana eo amin'ny CSMA sy ALOHA
Fahasamihafana eo amin'ny Gravity Christian sy ny Gravity Hindu